Nezvedu - Qihong Nyowani Matombo Zvigadzirwa Co, Ltd.
Shijiazhuang Qihong Nyowani Zvinyorwa Zvigadzirwa co., Ltd. ndeimwe yevashandi vekugadzira mafosi muNorthern China, iyo yakavambwa muna 1994, vashandi vanopfuura mazana maviri vanoshanda pano.
Nemitsetse mishanu yekugadzira mawenzi, isu tinowanzo gadzira kugadzira muchinjiso-inosanganiswa ne Foam foam, EVA foam, rabara rabha, gadzirisa zana zana emidziyo kutumira Foam mwedzi wega wega. Kuitira kugutsa zvido zvevatengi vedu, isu tinowanikwa nenzira dzakawanda dzekuita, sekufa kucheka, CNC chigayo, kupisa kurira, Thermo kuumba, kuomerera kutsigira, nezvimwe. Nemakore mazhinji ezviitiko izvi, dzimwe nyanzvi mhinduro dzinogona kuve zvakare yakapihwa, senge, multilayer laminating, dhizaini yemukati, yakakosha yakatemwa yekucheka uye inoshanda optimization.
Zvigadzirwa Uye Kugona
Tarisa pakugadzira yakavharwa-cell / open-cell LDPE uye EVA foam, uye rubber foam pamwe chete nemuchina akagadzirwa zvigadzirwa.
Kugona: Yakakwira foam chigadzirwa 5000m3/mwedzi.
Yakadzika foam chigadzirwa 2000m3/mwedzi.
Hunhu hwakanaka uye dhizaini yekugadzira.
Kupinza uye kutumira rezinesi kwakawanikwa kubva patakatanga, uye izvozvi zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, America, Australia, maodzanyemba akadziva kumabvazuva kweAsia nedzimwe nyika nematunhu.
Rwira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kutenda kwakanaka uye nekutarisira basa, kusangana nezvido zvevatengi, ndiyo musimboti wekambani yekuvandudza.
Tekinoroji yakabva kuSANWA KAKO CO..LTD muJapan.
Iyo inogovera yeZOTEFOAMS kubva kuUK.
Makore mazhinji kubatana ne CHIMENG INDUSTRY muTaiwan.
Main Vatengi: Haier, Panasonic, Schneider, Iyo Matatu Gorges Project, Iyo Projekiti Divert Mvura kubva kumaodzanyemba kusvika kuNorth, Major emapurojekiti enhandare.
Zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi maviri nematunhu, akadai seNorth America, Europe, Australia, Middle East, Southeast Asia, kutumirwa kwegore rega kuri approx. kupfuurisa h200 40HC.
Production Line Uye Inogadzirisa Center
Ruzivo rwekugadzira: Matambo mashanu anopupira.
Yakamhara uye Yakatsemuka Kupatsanurana
Bhatani Welding kuva akakura saizi mashizha & rolls
Cold / Kupisa Kumanikidza Thermo kuumba